नेकपाको तल्लो तहसम्म पुग्यो कारबाहीको होड
२८ पुस, कैलाली । पुस १७ गते नेकपा दाहाल-नेपाल समूहले नेकपा ओली पक्षका सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कर्ण थापा र कैलाली जिल्ला अध्यक्ष रतन थापालाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको थियो ।
दाहाल-नेपाल समूहले आयोजना गरेको प्रदेश कमिटीको चौथो बैठकले दुवैजनालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो । उक्त बैठकमा साबिकका इन्चार्ज भीम रावल सहभागी थिए । तर, अध्यक्ष कर्ण थापा भने उपस्थित थिएनन् । अध्यक्षविनाको बैठक वैधानिक नभएको भन्दै पुस १७ गते गरिएका सम्पूर्ण निर्णयहरू खारेज गरिएको नेकपा ओली पक्षका प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापाले जानकारी दिए ।
२२ गते धनगढीमा ओली पक्षले पनि प्रदेश कमिटीको चौथो बैठक आह्वान गर्‍यो । उक्त बैठकबाट ओली समूहले भीम रावललगायत ३ नेतालाई कारबाहीको सिफारिस भयो । इन्चार्ज रावलसँगै प्रदेश सचिव नेपबहादुर चौधरी र प्रदेश कार्यालय सचिव दिनेशचन्द्र सुवेदीलाई कारबाही गर्न केन्द्रमा सिफारिस गरेको हो । रावलमाथि खाताबाट ३० लाख झिकेर अनियमितता गरेको आरोप पनि लगाइएको छ, जसको रावलले खण्डन गरिसकेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजकमा ओली पक्षले लेखराज भट्टलाई प्रमुख बनाएको छ । प्रदेश अध्यक्ष भने कर्णबहादुर थापा छन् । थापाकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेश कमिटी विस्तार गरेको थियो ।
कारबाही श्रृंखला बढ्दै
पुस १४ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठन सिंह बोहरालाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बर्खास्त गरेका थिए । ओली समूहमा रहेकै कारण मन्त्री बोहरालाई विनाजानकारी मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरेका थिए । यो घटनापछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकले अर्कालाई कारबाहीको श्रृंखला सुरु भएको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भौतिक मन्त्री पठान सिंह बोहरा र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहरा मात्रै ओली समूहमा थिए । मुख्यमन्त्री भट्टले भौतिकमन्त्री बोहरालाई बर्खास्त गरेपछि अर्थ मन्त्री बोहरालाई भने हटाउने आँट गर्न सकेनन् । पछि पुस २२ गते काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै अर्थमन्त्री बोहराले पनि राजीनामा दिए ।
औपचारिकरूपले पार्टी फुट्नुभन्दा अघि नै सरकारभित्र कारबाही प्रक्रिया सुरु भइसकेको थियो । यो श्रृंखला सरकार हुँदै पार्टीमा छिर्यो । अहिले पार्टीभित्र एक पक्षले अर्काे पक्षलाई धमाधम कारबाही गरिरहेका छन् ।
सोमबार ओली पक्षले कञ्चनपुरका पार्टी सचिव तारा लामा तामाङलाई कारबाही गर्यो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक समेत रहेका तामाङलाई जिल्ला पार्टी सचिवको जिम्मेवारीबाट हटाएको ओली समूहले जनाएको छ ।
सोमबार नै अछाममा अध्यक्ष शेर बहादुर कुँवर र सचिव झपट साउदलाई पनि जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ । उनीहरू दुवै जना दाहाल-नेपाल समूहका हुन् । अहिले कसैलाई कारबाही नगरेको र जिम्मेवारीबाट मात्रै हटाइएको नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।
‘हामीले पार्टीको सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेका होइनौँ’ उनले भने, ‘उहाँहरूको जिम्मेवारी मात्रै खोसिएको हो ।’
ओली पक्षले मंगलबार धनगढीमा कैलालीको विस्तारित बैठक आह्वान गरेको छ । सो बैठकबाट थप ३ जनालाई कारबाही गर्ने ओली समूहको तयारी छ । लाल बहादुर सोडारी, कार्यालय सदस्य विनीता चौधरी र नवीन धामीलाई कारबाहीको तयारी भइरहेको ओली समूहका एक नेताले बताए ।
सोडारी दाहाल-नेपाल समूहका कैलाली पार्टी सचिव हुन् भने चौधरी प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री हुन् ।
ओली पक्षले जिल्लामा धमाधम कारबाही गरिरहेका बेला प्रचण्ड-दाहाल पक्षले कारबाहीमा परिसकेका व्यक्तिको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको कारबाही वैधानिक नहुने बताउँछ । ‘हामीले प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापालाई पुस १७ गते नै कारबाही गरिसकेका थियौँ,’ दाहाल-नेपाल समूहका प्रदेश सचिव नेपबहादुर चौधरीले भने, ‘उहाँ कारबाहीमा परिसकेपछि हामीलाई कारबाही गर्नुभएको रहेछ त्यो वैधानिक होइन ।’
प्रदेशबाट जिल्ला हुँदै कारबाहीको श्रृंखला अहिले पालिकास्तरमा समेत पुगिसकेको छ । पुस २६ गते कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा दाहाल-नेपाल समूहले अध्यक्ष बाधुराम चौधरीलाई कारबाही गरिएको छ ।
घोडाघोडी नगर सचिव खगेन्द्र हमालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चौधरीलाई केपी ओलीको कदमको समर्थन गरेर विज्ञप्ति जारी गरेपछि अध्यक्ष पदबाट निष्कासन गरिएको उल्लेख छ ।
प्रदेश पदाधिकारीमा को हाबी ?
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लाका पदाधिकारीमा ओली पक्षका भन्दा दाहाल-नेपाल पक्षका पदाधिकारी बढी छन् ।
९ जिल्लामध्ये हालसम्म ओली पक्षका ४ जिल्लामा अध्यक्ष र २ जिल्लामा सचिव रहेका छन् । दाहाल-नेपाल समूहका भने ५ जिल्लामा अध्यक्ष र ७ जिल्लामा सचिव रहेका छन् ।
अहिले ओली समूहले दाहाल-नेपाल समूहमा रहेका जिल्लाका पदाधिकारीहरुलाई हटाएर आफू पक्षका व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवारी दिइरहेको छ ।
कुन जिल्ला कसको पक्षमा ?
अध्यक्ष- रतन थापा, ओली पक्ष
सचिव- लाल बहादुर सोडारी, दाहाल-नेपाल समूह
अध्यक्ष- वीरबहादुर थापा, ओली समूह
सचिव- तारा लामा तामाङ, दाहाल-नेपाल समूह
अध्यक्ष- चक्र मल्ल, दाहाल-नेपाल समूह
सचिव- जङ्ग विक, दाहाल-नेपाल समूह
अध्यक्ष- मीनबहादुर कुँवर, दाहाल-नेपाल समूह
सचिव- दमन भण्डारी, दाहाल-नेपाल समूह
अध्यक्ष- मानसिंह माल, दाहाल-नेपाल समूह
सचिव- वीरेन्द्र कुमार बस्नेत, दाहाल-नेपाल समूह
अध्यक्ष- गणेश सिंह खत्री, दाहाल-नेपाल समूह
सचिव- उदय बडाल, ओली समूह
अध्यक्ष- सुरेन्द्र पाल, ओली समूह
सचिव- प्रेम प्रकाश भट्ट, दाहाल-नेपाल समूह
अध्यक्ष- शेरबहादुर कुँवर, दाहाल-नेपाल समूह
सचिव- झपट साउद, दाहाल- नेपाल समूह
अध्यक्ष- कालीबहादुर शाही, ओली समूह
सचिव- भरत बुढा, ओली समूह ।
एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठलाई पितृशोक
ECB’s Lagarde says pandemic recovery might be delayed, but shouldn’t be derailed
Categories Select Category Auto (856) Blog (3) English (1,404) Entertainment (962) Finance (2,003) Nepali (21,036) Sports (13,772) Tech (3,619) World (5,979)